watchOS 3 inouya yakatakurwa nenhau, kusanganisira iyo Scribble | Ndinobva mac
mawatchOS 3 anosvika akatakurwa nenhau, kusanganisira iyo Scribble
Zvaive pachena kuti nhasi Apple inoda kurova tafura kana zvasvika kune nyowani shanduro dzeanoshanda masisitimu ezvigadzirwa zvayo uye neiwatchOS 3 yakabudirira. Chinhu chekutanga chavanosimbisa ndechekuti maficha anoshanda nekukurumidza zvakanyanya kuwedzera kune iyo kushanda modhi neApple Tarisa shanduko.
Iyo itsva watchOS 3 yanga iri imwe yeanopokana ezuva ranhasi uye ndezvekuti avo veCupertino vabata chimwe nechimwe chezvikamu zvehurongwa kuti vavandudze. Ivo vakavandudza nzira iyo mameseji anotumirwa, akawedzera a Dock yezvishandiso, matambudziko akagadziridzwa, vakashandisa nzira nyowani yekunyora apo vakadaidza Scribble kana app nyowani inonzi Kufema.
Mazhinji achave matsva ayo newatchOS 3 ichauya nawo.Apple mainjiniya esoftware akaita zvakanyanyisa mikana yezvazvino Apple Watch uye vakapa kumonyoroka kune iyo nyowani system. Ivo vakavandudza nzira yatinofamba nayo wachi kuitira kuti izvozvi zvese zvinokurumidza. Zvakare, kune iyo nyowani nzira yekubhurawuza nzira nyowani dzekushandisa mabhatani maviri chete akagadzirwa icho mudziyo unacho, uchitibvumidza isu kuti tiite zvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu izvo isu zvatichazokuudza iwe mune zvinotevera nyaya
Nezve iyo Chiitiko application, mashandiro ayo akagadziridzwa, asi senge nyeredzi poindi, kushandiswa kwayo kwakaitwa kune vanhu vane kudzikisira kufamba uye vanoshandisa wiricheya. Iye zvino Apple Watch inogona zvakare kuyera chiitiko pachigaro chewiricheya ichitarisa nzira dzakasiyana idzo vanhu ava vanofanirwa kusunda mavhiri echigaro.
A nyowani system yekupindura kumeseji inonzi Scribble. Kana tichida kupindura neScribble, zvese zvatinofanirwa kuita tinya pane yayo icon uye nzvimbo inozooneka ipapo pachiratidziro patinogona kunyora tsamba dzemeseji yatinoda imwe neimwe.
Tora yemashoko ndiko kuoneka kwechishandiso chitsva chinonzi Kufema, chirongwa chitsva «Kufema» kuzorora uye kudzidza kufema, wakanangana neYoga.
Sezvauri kuona, huwandu hwekuvandudza hwakawanda uye ticharamba tichitaura pane imwe neimwe yadzo gare gare. Iyo sisitimu nyowani inowanikwa nhasi kune vanogadzira uye mukudonha kune vamwe vese vakafa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » mawatchOS 3 anosvika akatakurwa nenhau, kusanganisira iyo Scribble
Mhoroi, ndakagadziridza kutarisa os 3 asi sarudzo yekunyora haina kuoneka, ndinozviita sei?
Nehurombo zvinongoshanda chete kana tikachinja mutauro wewachi kuenda kuChirungu.
Kana kana iwe uchingoida chete muMameseji, unogona kushandura mutauro wekutanga kuChirungu uye unozoonekwa (chete muMameseji)
OS X inozotumidzwazve zita rekuti macOS!
Iyo WWDC yeiyi 2016 inotanga neakawanda anonakidza runyerekupe rwe maqueros